Kuyini ukusimama: izici nezinhlobo | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 14/04/2022 12:00 | Imvelo
Imvelo iya ngokuya ithonywa isenzo somuntu. Linjalo izinga esisebenzisa ngalo imithombo yemvelo kangangokuthi umhlaba awunaso isikhathi sokuzikhiqiza kabusha. Kulokhu, umqondo wokusimama wazalwa. Abantu abaningi abazi kuyini ukusimama Futhi yenzelweni ngokuhamba kwesikhathi?
Ngalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele ukuthi kuyini ukusimama, yiziphi izici zakho nezinzuzo eziphathelene nomphakathi kanye nemvelo.
1 kuyini ukusimama
2 Umqondo wokusimama ezingeni lomphakathi
3 Izinhlobo zokusimama
3.1 ukusimama kwemvelo
3.2 Ukusimama komnotho
4 Izibonelo Zokusimama
Kalula nje, ukusimama kungukuphatha izinsiza ukuhlangabezana nezidingo zamanje ngaphandle kokubeka izidingo zesikhathi esizayo engcupheni. Lokhu kubheka ukuthuthukiswa komphakathi, umnotho kanye nokuvikelwa kwemvelo ohlakeni lokubusa. Okokuqala, ukusimama kucabanga ukuthi imvelo nendawo akuzona izinsiza ezingapheli okufanele ivikelwe futhi isetshenziswe ngokunengqondo.
Okwesibili, intuthuko esimeme imayelana nokugqugquzela ukuthuthukiswa komphakathi kanye nokufuna inhlanganisela yomphakathi namasiko. Ngakho-ke, ifuna ukuzuza izinga elenelisayo lempilo, impilo kanye nemfundo. Okwesithathu, ukusimama kuqhuba ukukhula komnotho futhi kudalele wonke umuntu ingcebo elinganayo ngaphandle kokulimaza imvelo.
Ukusimama kuchazwa ngokuthi ukuhlangabezana nezidingo zamanje ngaphandle kokubeka engcupheni amandla ezizukulwane ezizayo ukuhlangabezana nezidingo zazo, ukuqinisekisa ukulingana phakathi kokukhula komnotho, ukuvikelwa kwemvelo kanye nenhlalakahle yomphakathi.
Umqondo wokusimama ezingeni lomphakathi
Ngakho-ke ukusimama kuyisibonelo senqubekelaphambili egcina lokhu kulinganisela okuntekenteke namuhla ngaphandle kokufaka engcupheni izinsiza zakusasa. Ukuze uyithole kuyadingeka ukusebenzisa umthetho we-3 rs, umthetho we-5 rs, futhi unciphise udoti kanye nodoti. Ngezenzo ezinjengalezi, singakwazi ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu kanye nokufudumala komhlaba.
Umqondo wamanje wokusimama uvele okokuqala ngqa ekushicilelweni kweBrundtland Report ka-1987, eyaziwa nangokuthi i-Our Common Future. imvelo. Ngakho-ke, iZizwe Ezihlangene zifuna ukunikeza izixazululo ezinkingeni ezibangelwa ukuthuthukiswa kwezimboni nokwanda kwabantu.
Ukusimama kushumekwe emicabangweni eminingana ehlobene, njengokuthi ukusimama kwemvelo, ukusimama komphakathi kanye nokusimama komnotho. Ngakho-ke, izinselele eziningi ezibhekene nesintu, njengokuguquguquka kwesimo sezulu noma ukushoda kwamanzi, zingaxazululwa kuphela ngokombono wembulunga yonke nangokukhuthaza intuthuko esimeme.
Ukusimama kwemvelo wuhlelo olugxile ekuvikeleni izinhlobonhlobo zemvelo ngaphandle kokuyeka inqubekelaphambili yezomnotho nezenhlalakahle.
Kubhekiselwa ekhonweni lesici sebhayoloji ukuze kugcinwe ukukhiqiza kwayo kanye nokwehlukahlukana kwayo ngokuhamba kwesikhathi, ngaleyo ndlela kugqugquzelwa isibopho esiqaphelayo mayelana nemvelo ukuze kuvikelwe imithombo yemvelo, kuyilapho kukhuthazwa ukuthuthukiswa komuntu ukuze kunakekele izindawo abahlala kuzo. Kunezinkampani eziningi namabhizinisi aqhuba lezi zinguquko njengamanje.
Ukusimama komnotho kuqinisekisa ukuthi imisebenzi efuna ukusimama kwemvelo nenhlalo inenzuzo.
Kushiwo ikhono lokudala ingcebo ngenani elanele, yokulingana emikhakheni eyahlukene yezenhlalakahle, amandla kanye nokuxazulula izinkinga zezomnotho zabantu, kanye nokuqinisa ukukhiqizwa nokusetshenziswa komkhakha okhiqiza imali. Kafushane, ukwanelisa izidingo ngaphandle kokudela izizukulwane ezizayo kuwukulingana phakathi komuntu nemvelo.
Ukusimama komphakathi kufuna ukubumbana nokuzinza kwesibalo sabantu. Kubhekiselwa ekwamukeleni amanani akhiqiza ukuziphatha okufana namagugu emvelo, ukugcina a izinga elivumelanayo nelenelisayo lemfundo, ukuqeqeshwa nokuqwashisa, ukusekela abantu bezwe ukuze bazithuthukise futhi balondoloze izinga elihle lokuphila, futhi bakhuthaze ukubamba iqhaza kwezakhamuzi. laba bantu Dala okuthile okusha emphakathini wanamuhla.
Ukusimama kwezombusazwe kudinga ukubusa okunemithetho ecacile yokulinganisa imvelo, umnotho kanye nomphakathi. Kubhekiselwa ekwabiweni kabusha kwamandla ezepolitiki nezomnotho, umbuso onemithetho engaguquki, uhulumeni ovikelekile, ukusungulwa kohlaka olusemthethweni iqinisekisa ukuhlonishwa kwabantu nendawo ezungezile, kanye nokugqugquzela ubumbano phakathi kwemiphakathi nezifunda ukuze kuthuthukiswe izinga lempilo yazo. impilo Yehlisa ukuncika kwemiphakathi ekusungulweni kwezinhlaka zentando yeningi.
Ngezansi kukhona izibonelo zentuthuko esimeme ukuze sisebenzise lo mqondo kuzo zonke izici zempilo yethu.
Ezingeni lamazwe ngamazwe, kunezinhlangano ezihlukahlukene lokho ziyasihola futhi zisiphelezele endleleni eya entuthukweni esimeme nezinye izihloko ezinjengokunakekela imvelo, ukufudumala komhlaba, ukuguquka kwesimo sezulu, njll.
IForamu Yezepolitiki Yezinga Eliphezulu Yentuthuko Esimeme, umphumela weNgqungquthela yeNhlangano Yezizwe Ezihlangene yowezi-2012 yokuThuthukiswa Okusimeme (i-Rio+20), ithathe indawo yeKhomishana Yentuthuko Esimeme. IsiGungu singumgwamanda ongaphansi woMkhandlu Wezomnotho Nezenhlalakahle kanye noMkhandlu-jikelele.
IKhomishani Yentuthuko Esimeme iyingxenye yoMkhandlu Wezomnotho Nezenhlalakahle futhi inomthwalo wemfanelo oyinhloko wazo zonke izindaba zemvelo. I-Intergovernmental Panel on Climate Change iyindikimba yochwepheshe ekhethekile ebuyekeza ucwaningo lwesayensi futhi yazise abakhi benqubomgomo.
I-United Nations Forum on Forests iyinhlangano engaphansi yoMkhandlu Wezomnotho Nezenhlalakahle; yenza umsebenzi wezindikimba ezimbili ezandulele ezibalwe ngezansi. I-United Nations Environment Programme (UNEP) ungumkhulumeli wezemvelo ngaphakathi kohlelo lweNhlangano Yezizwe. I-UNEP isebenza njenge-catalyst, i-enabled, uthisha kanye nomgqugquzeli wokusetshenziswa okuhlakaniphile nokuthuthukiswa okuqhubekayo kwendawo ezungezile yomhlaba.
Njengoba ubona, zonke lezi zici zibalulekile ekulondolozweni kwemvelo kanye nokwenza ngcono umnotho nomphakathi. Ngethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi kuyini ukusimama nokuthi yiziphi izinzuzo zako.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » kuyini ukusimama
izitshalo ezihlanza umoya